di Davide Sabbatini - November 26, 2021
Ụbọchị ụka na-abịa, Nọvemba 28, bụ mmalite nke afọ akwụkwọ nsọ ọhụrụ nke Ụka Katọlik na-eme mmemme ahụ. Sunday mbụ nke biakwa obibia.
Okwu 'Advent' sitere na okwu Latin 'adventus'nke na-egosi ọbịbịa, mbata na ọnụnọ nke onye dị mkpa karịsịa.
Maka anyị ndị Kraịst, oge nke Ọbịbịa bụ oge ịtụ anya, oge olileanya, oge nkwado maka ọbịbịa nke Onye Nzọpụta anyị.
"Mgbe Chọọchị na-eme ememe biakwa obibia liturgy kwa afọ, ọ na-eme ka ugbu a oge ochie na-atụ anya Mesaịa ahụ, ebe ọ bụ na site na-ekere òkè na ogologo nkwadebe maka mbụ nke Onye Nzọpụta na-abịa, ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-emeghachi ha oké ọchịchọ maka ọbịbịa nke ugboro abụọ ya" (Catechism nke Catholic. Ụka, nọmba 524).
Oge nke biakwa obibia nwere izu 4 nke nkwadebe ime maka:
emume ncheta nke 1st na-abia nke Onye Nzọpụta anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ihe karịrị puku afọ abụọ gara aga na ọmụmụ Ya a Betlehem na anyị na-eme ememe n'ụbọchị Krismas;
Ọbịbịa nke abụọ ya nke ga-eme n’ọgwụgwụ ụwa mgbe Jizọs ga-abịa n’ebube ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, Alaeze ya agaghịkwa enwe ọgwụgwụ.
Otú ọ dị, anyị agaghị echefu na ka anyị na-akwado maka ncheta nke ọbịbịa mbụ nke Onye Nzọpụta anyị na ọbịbịa nke ugboro abụọ ya, Chineke nọ n'etiti anyị ebe a na ugbu a na anyị ga-eji ohere nke oge a magburu onwe ya mee ka ọchịchọ anyị dị ọhụrụ, nstra nostalgia, anyị. ezi ọchịchọ nke Kraịst.
Site n'ụzọ, dị ka o kwuru Pope Benedict XVI na homily mara mma na November 28, 2009: “Ihe dị mkpa okwu ahụ adventus pụtara bụ: Chineke nọ ebe a, ọ hapụghị ụwa, ọ hapụghị anyị. Ọ bụrụgodị na anyị enweghị ike ịhụ ya ma metụ ya aka dị ka anyị nwere ike iji ihe ndị a na-ahụ anya, ọ nọ ebe a ma na-abịa eleta anyị n'ọtụtụ ụzọ. "